:: My Little World ::: November 2006
ဒီနေ့ကျွန်မ မေမေရဲ့ မွေးနေ့ ...
မေမေ့မွေးနေ့ မှာ မနားမှာရှိမနေနိုင်ပေမယ့် မေ့သမီး အဝေးကနေ ဆုတောင်းပေးချင်ပါတယ်...
ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းသော မွေးနေ့ဖြစ်ပါစေ .. မေမေ..
မိဘကျေးဇူးသိတတ်ပြီး၊ မိဘကို စိတ်ချမ်းသာအောင် ထားနိုင်သော သားသမီးများကိုသာ မေမေ ပိုင်ဆိုင်ပြီး
ဖေဖေနဲ့တူတူ သက်ဆုံးတိုင် ပျော်ရွှင်ဖွယ် နိုင်ပါစေ။
Posted by Nay Nay Naing at 11/19/2006 09:58:00 AM0comments
ယူအက်စ်ကနေ တခြားနိုင်ငံတွေ (နိုင်ငံပေါင်း 50 ကျော်ကို ၊ မြန်မာနိုင်ငံတော့ မပါပါဘူး) ကို free ခေါ်လို့ ရတဲ့ Site ပါ။ User အကောင့်တွေဘာတွေ ဘာမှ create လုပ်စရာမလို သလို ၊ Internet ကိုလည်း သုံးနေစရာမလို ပါဘူး။ ကြိုက်တဲ့ နေရာက နေ ဖုန်းခေါ်လို့ ရပါတယ်။ ကိုယ့်မှာ ဖုန်းလေး တစ်လုံးတော့ ရှိနေဖို့လိုတာပေါ့နော်။
ကိုယ့်ရဲ့ ဖုန်းကနေ အဲ့ဒီ Site မှာ ပေးထားတဲ့ Ph no. ကို ဖုန်းခေါ်လိုက်ရင် အဲ့ဒီကနေပြီး ပြန်ခေါ်ပေးတယ်လို့သိရပါတယ်။ ပြီးမှ ကိုယ်ခေါ်ချင်တဲ့ Ph no. ကို dial ပြီး ခေါ်လို့ ရတယ် ပြောထားတယ်။ သိသလောက်တော့ U.S က HandPhone ကိုင်တဲ့သူ တော်တော်များများ ယူထားတဲ့ Service Plan တွေက Incoming Call တွေ အတွက်ကိုပါ ပိုက်ဆံပေးရတယ်ဆိုတော Daytime( Peak Time) ဆို သူတို့ တွေ သုံးရတာ အဆင်ပြေမယ် မထင်ဘူး။ ဒီနိုင်ငံလို Incoming Call ဆို တစ်ပြားမှ မပေးရတဲ့ တိုင်းပြည်မှာသာ ဒီလို အလကား ဖုန်းခေါ်လို့ရတဲ့Service မျိုး သာရလို့ ကတော့ ဘယ်ပြောကောင်းလိုက်မလဲ။ ဒါပေမယ့်လည်း သူတို့ စီမှာ ဖုန်းအများစုက ဒီမှာလို မဟုတ်ပဲ Off-Peak Time တွေမှာ Incoming Call ရော၊ Outgoing Call ရော free ဆိုတော့ ညနေနဲ့ညဖက်တွေမှာ ဒီ Site က Ph no. ကိုသုံးပြီး Oversea Call ခေါ်ရင်တော့ အဆင်ပြေလောက်တယ်။ ဘာပဲ ပြောပြော အလကားခေါ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ ကောင်းတာပေါ့။
ကျွန်မတို့ဒီနိုင်ငံမှာ သုံးလို့မရပေမယ့် သုံးလို့ ရတယ်သူများ သုံးနိုင်အောင် မျှဝေလိုက်တာပါ။ ယူအက်စ်က သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကတော့ ဒီ Site ကို သူတို့ ဆီက သတင်းစာတွေမှာလည်း ကြော်ငြာထားတာ တွေ့ တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
Source : FuturePhone.com
Posted by Nay Nay Naing at 11/15/2006 11:25:00 AM3comments
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် ပို့ ပေးခဲ့တာပါ။ဒီ အီးမေးရတာ ကြာတော့ကြာပါပြီ၊အောက်တိုဘာ၂၀၀၅ က ပို့ထားတာ။ ဒီနေ့ မှ အီးမေးဟောင်းတွေ ရှင်းရင်း နဲ့ပြန်ဖတ်မိတာပါ။ ပို့ ပေးခဲ့တဲ့ သူငယ်ချင်း STA ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒါက ကျွန်မ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အမြဲ ကြုံတွေ့နေရတာတွေ ဖြစ်ပြီး ၊ ပြောထားတဲ့ အချက်တွေ ကလည်း မှန်နေတာမို့ လို့ ၊ ဒါလေးကို ဖတ်မိတ်ိုင်း အနည်းဆုံးတော့ ပြုံးလိုက်မိတယ်။
ကျွန်မလည်း ဒီထဲက အချက်တွေကို တော်တော်များများကို ပြောလေ့ရှိတယ်။ အဲ.. ဘာကြောင့် ဆိုတဲ့ reason မပေးခင် ကိုယ့်ဘက်ကသေချာအောင် ပြန်စဉ်းစားဖို့ လိုတယ်၊ reason ပေးပြီးရင်လည်း အဲ့ဒီ ပေးလိုက်တဲ့ reason က မှန်ကန် ကြောင်းကိုတော့ သက်သေပြနိုင်ဖို့လိုပြန်ရော။ မဟုတ်ရင် နောက်ပိုင်း ကိုယ်ပြောတဲ့စကား သူတို့မယုံဘူးဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။
Source : Email , C.E.O
Posted by Nay Nay Naing at 11/15/2006 10:19:00 AM2comments
ဘာရယ်မဟုတ်ပါဘူး၊ ဒီနေ့ဈေးဆိုင်သွားရင်း တွေ့ လိုက်တဲ့ ချယ်ရီသီးလေးတွေ စားချင်စိတ်ပေါက်လာလို့ဒီပိုစ့်ကို တင်လိုက်တာပါ။ ကျွန်မ ရန်ကုန်မှာတုန်းက ချယ်ရီသီး တစ်ခါမှ မစားဘူးခဲ့ပါဘူး။ ကျောင်းသွားတက်တော့ အသီးလေးတွေ လှတာနဲ့ဝယ်စားဖြစ်ရာကနေ ကြိုက်သွားတာပါ။ ကျွန်မ သူငယ်ချင်းတွေကတော့ ချယ်ရီသီးရဲ့ အရသာက ဘာမှလည်း မထူးခြားဘူးဆိုပြီး ထူးထူးခြားခြား မကြိုက်ကြဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မ ၀ယ်လာရင်တော့ လာစားပေးကြ ပါတယ်။ ကျွန်မကတော့ အမြဲနီးပါး ၀ယ်စားဖြစ်ခဲ့တယ်။ ခုတော့ ဒီမှာ 100 g ကို4S$ နီးပါးပေးရတယ်လေ။ ၀ယ်စားဖို့ဘယ်လိုမှ မတန်ဘူးရှင့်။ မတန်ဘူးသာပြောတာပါ တခါတလေ စိတ်ကူးပေါက်ရင်တော့လည်း ၀ယ်စားမိလိုက်သေးတယ်။ ဈေးကြီးလို့အမြဲတော့ မစားနိုင်တော့ဘူး။
နောက်ပြီး ဟိုမှာ အိမ်ရှေ့ တွေမှာ ချယ်ရီသီးပင်တွေ စိုက်ထားတာတွေ့ ရတယ်။ ကျွန်မက သစ်ပင်တွေကို စိတ်ဝင်စားတော့ သတိတော့ ထားမိလိုက်တယ်။ ဒါပေမယ့် အစကတော့ ဘာပင်တွေမှန်းမသိဘူးပေါ့။ တခါမှ မမြင်ဘူးတာ။ နောက်ပိုင်း အသီးတွေ ပင်လုံးပြွတ်အောင် သီးနေတာတွေ့ ရတော့ အရမ်း သဘောကျမိတယ်။ စိတ်ကူးမိတယ် တနေ့ နေ့ ကိုယ်ပိုင်အိမ်လေးရှိရင် အိမ်ရှေ့ မှာဖြစ်ဖြစ်၊ အိမ်နောက်မှာဖြစ်ဖြစ် ချယ်ရီသီးပင် တစ်ပင်လောက်တော့ အနည်းဆုံး စိုက်ထားဦးမယ်လို့ ။ ခုထိတော့ စိုက်နိုင်ဖို့လမ်းမမြင်သေးပါဘူး။ အဲ့ဒီ အပင်တွေ စိုက်ဖို့သူနဲ့ကိုက်တဲ့ ရာသီဥတု ရှိတဲ့ နေရာမှာ နေဖြစ်ခဲ့ရင့် တစ်ပင်လောက်တော့ အနည်းဆုံး စိုက်ဖြစ်အောင်စိုက်ကြည့်ဦးမယ်။ စိတ်ကူးတွေပေါ့လေ။
ချယ်ရီသီးမှာ အမျိုးအစားအများပြားရှိပါတယ်။ ကျွန်မသိသလောက်တော့ Bing, Lapin, Montmorency, Rainier, Stella, Sweetheart နဲ့Van တို့ ပါ။ အဲ့ဒီထဲက Bing နဲ့Stella အမျိုး အစား ချယ်ရီသီးတွေကို ကျွန်မ အကြိုက်ဆုံးပါပဲ။ အဲ့ဒီ အသီးတွေက လှလည်းလှ ချိုလည်းချို ဒီတိုင်းစားလို့ လည်း ကောင်းတယ်လေ။ ချယ်ရီသီးက ချီုတယ်ဆိုပေမယ့် အမျိုးအစားတိုင်းချိုတဲ့ အရသာရှိတာ မဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ချို့ချယ်ရီသီးတွေက ချဉ်တဲ့ အရသာရှိပါတယ်။ Montmorency ဆို ချဉ်တဲ့ အရသာရှိပြီး ဟင်းချက်တာနဲ့pie လုပ်တဲ့ နေရာတွေမှာ အသုံးများပါတယ်။
ဒီမှာ ကျွန်မ စားချင်တဲ့ ချယ်ရီသီးတွေ….
ဒါက ချယ်ရီပွင့်တွေ ....
ချယ်ရီပင်၊ ချယ်ရီပွင့်နဲ့ချယ်ရီသီးတွေ အကြောင်း အသေးစိတ်သိချင်ရင်တော့ wiki - cherry မှာ ဖတ်ကြည့်လို့ ရပါတယ်။ ပုံလေးတွေလည်း ပါတယ်။
Posted by Nay Nay Naing at 11/14/2006 07:46:00 AM4comments
Song : Listen and Download
Lyrics : www.sing365.com
Posted by Nay Nay Naing at 11/11/2006 02:56:00 PM3comments
ကျွန်မ ရဲ့ သူငယ်ချင်းတယောက် ဟိုရက်ပိုင်းက သူ thesis အတွက် visio ကို သုံးပြီး ပုံတွေဆွဲနေရတယ်ဆိုတာ ကြားပြီးထဲက Drawing Tools တွေ အကြာင်း တွေးနေမိခဲ့တာပါ။ ရှေ့ က online file convector ပိုစ့်ကိုရေးရင်နဲ့online drawing tools တွေ လည်းရှိမှာပဲလို့ တွေးမိလို့ လိုက်ရှာကြည့်တော့
ကို တွေ့ တယ်။ တစ်ခြား ကျွန်မ မတွေ့ သေးတဲ့ Free Drawing Online Tools တွေလည်း ရှိချင်ရှိမှာပါ။ သိသူများ မျှဝေ စေချင်ပါတယ်။ ခုတော့ ကျွန်မတွေ့ လိုက်တာလေးတွေအကြောင်း ဖတ်မိ၊ စမ်းမိသလောက် ရေးထားလိုက်ဦးမယ်။
CumulateLabs - Click here to Watch the CumulateLabs video at YouTube
user account တွေဘာတွေနဲ့login လုပ်စရာမလိုပါဘူး။
draw ဆိုတာကို click လုပ်လိုက်ရုံနဲ့ပုံစဆွဲလို့ ရပါပြီ။
သူ့ မှာ two types of diagrams (basic shape နဲ့flow chart) ဆိုပြီး ပုံစံ နှစ်မျိုး ရွေးလို့ ရပါတယ်။
ကိုယ်ဆွဲချင်တဲ့ shape (ပုံမှာ) click လုပ်၊ ပြီးရင် drawing window မှာ သွားပြီး click လုပ် ပြီး၊ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ size ရအောင် drag လုပ်လိုက်ရုံပါပဲ။
ဆွဲပြီးသား ပုံတွေကို save ဆိုတာကို click လုပ်လိုက်ရင် JPEG, PNG, SVG, PDF (alpha) and MMD/FMD ပုံစံတွေနဲ့user တွေရဲ့ ကွန်ပြူတာမှာ သိမ်းလို့ ရ နေတယ်။
သူရဲ့ site မှာတော့ သိမ်းလို့ မရသေးပါဘူး။
ကိုယ့် ကွန်ပြူတာထဲမှာ သိမ်းထားတဲ့ files တွေကို ပြန်ဖွင့်ပြီး edit လုပ်လို့ရပါတယ်။ ခုလက်ရှိတော့ MMD/FMD format နဲ့သိမ်းထားတာတွေကိုပဲ ပြန် edit လုပ်လို့ ရပါသေးတယ်။
MMD files can only be opened and modified in IE လို့ ရေးထားတာတွေ့ ပေမယ့် ကျွန်မ Firefox သုံးပြီး စမ်းကြည့်တာတော့ အဆင်ပြေနေတယ်။
Opensource ဖြစ်လို့source ကို ဒေါင်းလုတ်လုပ်လို့ ရပါတယ်။ Click here to Download Source Code
အပေါ်က အချက်တွေက ခုလက်ရှိရနေတဲ့ feature တွေပါ။ ကျွန်မ အထင်တော့ CumulateLabs က opensource ဆိုတော့ ခုချိန်မှာ လုပ်နိုင်တာတွေ သိပ်မများသေးပေမယ့် နောက်ပိုင်း ဒီထက်အများကြီး ပိုကောင်းလာဖို့အလားအလာရှိနေပါတယ်။
Gliffy - Click here to Watch the Gliffy video demo
flash ကိုသုံးထားတဲ့ online drawing tools ပါ။
သုံးမယ်ဆို user account နဲ့login လုပ်ပြီးမှ သာ သုံးလို့ ရပါတယ်။
free user account create လုပ်လို့ ရပါတယ်။
သူ့ မှာ six types of diagrams (Flow Chart, UML, Network , User Interface, Floor Plan နဲ့Basic Shapes) ဆိုပြီး ပုံစံ ခြောက်မျိုး ရွေးလို့ ရပါတယ်။
ဒီမှာက ဆွဲပြီးပုံတွေကို save လုပ်ထားလို ရပါတယ် ။ gliffy မှာက save လုပ်ထားတဲ့ file တွေကို သူရဲ့ server မှာ သိမ်းထားတာပါ။ ကိုယ့် computer မှာ သိမ်ချင်တယ်ဆိုရင် သူ့ စီမှာ Export လုပ်တဲ့ feature ပါပါတယ်။
Export as SVG, Export as JPEG နဲ့Export as PNG ဆိုပြီး type သုံးမျိုးနဲ့သိမ်းလို့ ရပါတယ်။
Edit လုပ်တာကတော့ သူရဲ့ server မှာ သိမ်းထားတဲ့ file တွေကိုပဲ edit ပြန်လုပ်လို့ ရပြီး export လုပ်ထားတာတွေကိုတော့ ပြန် edit လုပ်လို့ မရတော့ပါဘူး။
Gliffy မှာ ထူးခြားတဲ့ feature ကတော့ ကိုယ့်ဆွဲထားတဲ့ ပုံတွေကို သူများနဲ့share လုပ်နိုင်တာပါပဲ။
Share မှာ type နှစ်မျိုးနဲ့share လုပ်နိုင်ပါတယ်။
၁။ Collaborate - ကို share ပေးချင်တဲ့ သူရဲ့ email address ကိုထည့်ပေးလိုက်ရုံနဲ့တစ်ဖက်လူက ကိုယ့်ပုံကို ကြည့်ရုံမကဘူး edit ပါလုပ်နိုင်သွားပါတယ်။
၂။ Publish to internet - ကိုယ်ဆွဲထားတဲ့ ပုံကို wiki, blog နဲ့တစ်ခြား website တွေမှာ ပြလို့ရအောင် အတွက် ပါတယ်။
CumulateLabs နဲ့ယှဉ်ရင် Gliffy မှာလုပ်လို့ ရတယ် feature တွေပိုများပြီး ပိုကောင်းနေပါတယ်။ Galiffy က ခုချိန်မှာ free ဖြစ်ပေမယ့် နောက်ပိုင်းကြရင်တော့
Free user with limited feature နဲ့ 
Business User with premium features လို့ ခွဲမယ်လို့ပြောထားတာကို Dliffy pricing plans မှာ ပြောထားတာကို ဖတ်ရပါတယ်။
Source : Digg , Dliffy , CumulateLabs
Posted by Nay Nay Naing at 11/08/2006 04:16:00 PM2comments
file တွေကို ဘယ် software မှ download လုပ်စရာမလိုပဲ convert လုပ်လို့ ချင်တယ်ဆိုရင် ဒီ ZamZar ဆိုတဲ့ website ကိုသုံးပြီး အဲ့ဒီ site ကနေ convert လုပ်လို့ ရပါတယ်။ ဖတ်ကြည့်ရသလောက်ဆိုရင် file type တော်တော်များများကို ပြောင်းလို့ ရတယ်လို့အဲ့ဒီ site မှာရေးထားပါတယ်။ အသုံးဝင်မယ်ထင်လို့ဒီမှာ မှတ်ထားလိုက်တာပါ။
ပြောင်းလို့ ရတဲ့ file format list ပါ။ ဒီ လင့်ခ့် ConversionTypes မှာ ကြည့်ရင်လည်း ရပါတယ်။
ဒီမှာက ဘယ်လို ပြောင်းရမလည်း ဆိုတာကို ရှင်းပြထားတာပါ။
convert မလုပ်ခင်မှာ အဲ့ဒီ site က Terms of Service for Zamzarဆိုတာလည်းကို အရင် ဖတ်ကြည့်ကြပါ။
Source : YouNeed2See , Zamzar
Posted by Nay Nay Naing at 11/08/2006 11:59:00 AM2comments
ဒီရက်ပိုင်း အလုပ်သစ်မှာ အချိန်ပိုတွေ များနေတာကြောင့် internet မှာ Tutorials လေးတွေ လိုက်ဖတ် ဖြစ်ရာကနေ အရမ်း နာမည်ကြီးနေတဲ့ AJAX နဲ့ ပတ်သက်တာ လေးတွေ ဖတ်ဖြစ်သွားတယ်။ AJAX ဆိုတာကို သူများတွေပြော၊ internet မှာလည်း ဟိုနေရာတွေ့ဒီနေရာတွေ့ နဲ့တွေ့ ၊ အထူးသဖြင့် Google ရဲ့ websites တွေမှာ AJAX ကို အသုံးပြုထားတယ် ဆိုတာကို သတိထားမိနေတာ ကြာ ပါပြီ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း ကိ်ုယ်နဲ့ မဆိုင်လို သတ်မှတ်လိုက်ရင် လုံးဝလေ့လာချင်စိတ် မရှိလေတော့ ဘာမှန်းသိအောင် တခါလေးရယ်မှ မကြိုးစားခဲ့၊ မလေ့လာခဲ့၊ မဖတ်ရှု ခဲ့ပါဘူး။
ဒီနေရာမှာ တစ်ခု ပြောချင်တာက ကျွန်မနဲ့ ဆိုင်မဆိုင်ကို ကျွန်မ ဘယ်လို သတ်မှတ်လည်းဆိုတာကိုပါ။ သူများတွေက နည်းပညာ အသစ်တစ်ခု ထွက်ရင် လေ့လာချင်တယ်၊ သိချင်ကြတယ်။ အဲ့ဒါကောင်းပါတယ်။ ကျွန်မကတော့ အလိုမဟုတ်ဘူးရှင့်။ အပျင်းထူပါတယ်။ ကျွန်မ အလုပ်နဲ့ပတ်သက်တာဆို လိုသလောက် လေ့လာတယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်မ စိတ်ဝင်စားတာဆိုရင်ကတော့ လိုလို မလိုလို လေ့လာတတ်ပါတယ်။ (ကျွန်မ စိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းအရာကလည်း အလွန်ရှားပါတယ်။) IT လောကမှာ ကျွန်မသိတယ်ဆိုတဲ့ ပမာဏ က သူများတွေ( ကျွန်မ နဲ့တန်းတူ အလုပ်လုပ်နေသူတွေနဲ့ ယှဉ်ရင် ) အလွန်နည်းတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ဒါတောင် ခု ကျွန်မလုပ်နေတဲ့ အလုပ်က ကျွန်မ ၀ါသနာပါ ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ အလုပ်မို့ သာ ဒီလောက် သိအောင်လုပ်ဖြစ်တာပါ။ သူများတွေလို ၀ါသနာမပါတာကို လုပ်နေရမယ်ဆို ဘယ်လိုများ နေမလဲ မသိပါဘူး။ ထုံးစံ အတိုင်း ပြောချင်တာ တခြား၊ ပြောနေတာ တခြား ဖြစ်နေပြန်ပြီ ထင်တယ်။ ကဲ ပြောချင်တဲ့ AJAX အကြောင်းလေး ပြန်ဆက်လိုက် ဦးမယ်...
ပထမဆုံးပြောခဲ့သလို AJAX ဆိုတာ ဘာမှန်း ကျွန်မသိခဲ့ပါဘူး။ AJAX အကြောင်း စဖတ်တော့မယ်ဆိုတော့ AJAX ဘာလည်းဆိုတာကို သိဖို့ လို သွားပြီ။
Source : W3School (AJAX tutorial) ,
Developer (AJAX from Scratch)
နောက်ပိုင်း ဖတ်ဖြစ်တာတွေ တော့ ကျွန်မ အသေးစိတ် မရေးတော့ပါဘူး။ ကျွန်မ က ခုရက်ပိုင်မှ AJAX အကြောင်း စလေ့လာဖြစ်တာဆိုတော့ detail သိပ်မသိသေးတဲ့ အတွက် အသေးစိတ် မဆွေးနွေးတော့တာပါ။ ဒီမှာ အဓိက ပြောချင်တာက ခုလို စိတ်ဝင်စားသွား၊ ကျွန်မ အတွက် အသုံးဝင်မယ် ထင်သွားလို့AJAX ကို ကျွန်မ ဆက်ဖတ်ဖြစ်၊ လေ့လာဖြစ်သွား တယ်ဆိုတာကို ပါ။ AJAX isaweb browser technology independent of web server software. ဆိုတော့ Web Application Development လုပ်နေသူအားလုံး AJAX ကို အချိန်ရရင် ရသလို လေ့လာထားမယ်ဆို မှားမယ် မထင်ပါဘူး။
ကျွန်မ လိုက်ရှာတွေ့ တဲ့ AJAX နဲ့ ပတ်သက်တဲ့လင်ခ့် လေးတွေပါ။
ဒါက AJAX ကိုသုံးထားတဲ့site list ပါ။
ကျွန်မသိတဲ့နာမည်ကြီး site တွေ gmail , google calendar, google groups, flickr , meebo, MSN space, yahoo, yahoo photo, yahoo search……… အို…… အများကြီးပါပဲ။
Yahoo ဆိုလို ပြောရဦးမယ်။ အသစ်ဖြစ်တဲ့ yahoo ajax email က Microsoft နဲ့ အဆင်ပြေအောင် လုပ်ထားတာ ဆိုတော့ IE မှာသုံးရင် မြန်ပေမယ့် Firefox နဲ့သုံးရင် နည်းနည်းနှေးသလို ဖြစ်နေတယ်။
ဒါက google က ထုတ်တဲ့ java အတွက် AJAX application လုပ်ဖို့framework.
Java Developer တွေ တော်တော်များများကတော့ အဓိက သုံးတဲ့ free IED ဖြစ်တဲ့ Eclipse မှာ GWT ကိုအလွယ်တကူသုံးနိုင်အောင် ကူညီပေးမယ့် Plug-in ရှိပါတယ်။ ဒီမှာ ဒေါင်းလုတ်လုပ် လို့ ရပါတယ်။
Googlipse - Eclipse plugin for Google Web Toolkit(GWT)
ဒီမှာက AJAX Tutorials လင့်ခ့်တွေပါ။
10 AJAX Tutorials for Beginners ဒီ YouNeed2See site မှာ တစ်ခြား CSS ကူတိုရီရယ်တွေလည်း ရှိပါတယ်။
AJAX-Tutorials Top List
30 AJAX Tutorials – Max Kiesler (March 15, 2006)
60 AJAX Tutorials – Max Kiesler (May 08, 2006)
42 Recent AJAX Tutorials – Max Kiesler (July 04, 2006)
ဒီ လင်ခ့် တွေမှာ AJAX ကျူတိုရီရယ် sites တော်တော်များများကို စုပေးထားတယ်။ MaxKiesler.com မှာ AJAX နဲ့ပတ်သက်တဲ့ သတင်းတွေ ၊ ကျူတိုရီရယ် site တွေကို ကြည့်ရှု့ လို့ ရပါတယ်။
ဒီပိုစ့်ကို လာဖတ်မိသူများ ထဲမှာ AJAX အကြောင်း လေ့လာဘူးလို့ကျွန်မ ( AJAX ကို ခုမှ စတင်လေ့လာသူများ) ဖတ်သင့်တယ် ထင်တဲ့ sites လေးတွေများရှိရင် comments မှာ ချန်ထားပေးခဲ့ နိုင်မယ်ဆိုရင် ကျေးဇူး အထူး တင်နေမှာပါ။
Posted by Nay Nay Naing at 11/07/2006 12:22:00 PM2comments
အလုပ်ရောက်ပြီဆို အိတ်ကလေး ဘေးချ၊
သတင်းတွေဖတ်၊ ဘလောခ့်တွေဖတ်၊ ဖိုရမ်တွေဖတ်၊
ဟိုရေး ဒီရေး၊ ရေးချင်တာတွေ လျှောက်ရေး၊
နည်းနည်း စိတ်ကြည်လင်ရင် အွန်လိုင်းက ကျူတိုရီရယ် လေးတွေ လိုက်ကြည့်၊
နေ့ လည်စာ စားချိန်ရောက်ပြီဆို တစ်ယောက်တည်း နေ့ လည်စာလေး သွားစား၊
စားပြီး ပြန်လာတော့ အပေါ်မှာပြောထားတာတွေ ပြန်လုပ်ရင်း ညနေအလုပ်ဆင်းမယ့် အချိန်ကို စောင့်၊
ညနေ ၆နာရီလည်း ထိုးရော အိတ်ကလေး ကောက်လွယ်ပြီး အိမ်ပြန်၊
အိမ်ရောက်ပြီဆို ထမင်းလေးချက် ညစာလေးစား၊
ပြီးတော့ ရေလေးချိုးပြီး အိပ်ရာဝင်။
အလုပ်သစ်မှာ ဘယ်လိုလဲ၊ အဆင်ပြေလား၊ ဂရုတစိုက် မေးဖေါ်ရသော သူငယ်ချင်များ၊ ဒီပိုစ့်လေးဖတ်ပြီးရင် အလုပ်သစ်က ဘယ်လိုလည်း ဆိုတာ သိလောက်ရောပေါ့။ ဘ၀ကြီးက အေးချမ်းနေလိုက်တာလို့ခုချိန်မှာ ပြောနိုင်ပေမယ့် ဒီအတိုင်းသာ ဆက်နေသွားရင် အပျင်းကြီးလာပြီး အသက်တို လောက်တယ်။ နောက်ပြီး သိပ်လည်း မငြီးရဲဘူး။ ဒီလောက်အားနေတာ တမျိုးကြီးပဲ။ ခုချိန်မှာ ဘာမှ လုပ်စရာမရှိ၊ အားနေသလောက် နောင်များမှာ အလုပ်တွေ သေလောက်အောင်ရှုပ်လာမှာ စိုးရိမ်နေရပါတယ်။
Posted by Nay Nay Naing at 11/03/2006 04:14:00 PM6comments
Posted by Nay Nay Naing at 11/03/2006 02:08:00 PM0comments
အောက်မှာ ရေးထားတဲ့ သတင်းကို အသေးစိတ်ဖတ်ပြီးနောက် တစ်ခု ထပ်ပြီး စဉ်းစားနေမိပြန်တယ်။ (အားနေတာနဲ့လုပ်စရာမရှိ လျှောက်တွေးနေတာလို့ထင်လိုကထင်နိုင်၊ မနာလို ဖြစ်လိုက မနာလိုဖြစ်နိုင် ပါတယ်။) website သန်း ၁၀၀ ကျော်မှာ သန်း ၅၀ လောက်ပဲ active ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့၊ ကျန်တဲ့ site တွေက ဘာဖြစ်နေလဲ။ ဒီမှာ ဖြစ်နိုင်တာ တစ်ခုပဲရှိတယ်။ လူတွေက သူတို့ လို ချင်တဲ့ name တွေပဲ ၀ယ်ထားပြီး site တွေကို build မလုပ်ကြသေးပဲ နေမှာပေါ့။ ဘာလို site တွေကို internet မှာ active ဖြစ်အောင်မလုပ်ချင်သေးပဲနဲ့name တွေ ကြိုဝယ်ထားတာလဲ။ ရှင်းပါတယ်။ ခုချိန်မှာ website မလုပ်နိုင်၊ မလုပ်ချင်သေးပေမယ့် တစ်နေ့ နေ့ တစ်ချိန်ချိန်မှာ ခေတ်နဲ့အညီ၊ အမှီလိုက်ပြီး website တွေလုပ်တော့မယ်ဆို ကိုယ်လိုချင်တဲ့ နာမည်မရမှာ စိုးရိမ်လို့ ပေါ့။
ဒါနဲ့ ဆက်စပ်ပြီး ကြုံတုန်းလေး ဆက်စဉ်းစားလိုက်ဦးမယ်။ ကိုယ်ပိုင် web site name (domain name) ကို ၀ယ်တော့မယ်ဆို ဘယ်လို စဉ်းစားပြီး ၀ယ်ကြသလဲ။ company တွေကတော့ ရှင်းပါတယ်။ သူတို့company ရဲ့ နာမည်နဲ့ ပဲ ၀ယ်ကြမှာပေါ့။ company နာမည်က တစ်ခြား၊ web site နာမည်က တစ်ခြား ဖြစ်နေတာမျိုးက ရှားပါတယ်။ ရှိတော့ရှိတယ်၊ ရှားတယ်ပေါ့။ ဒါရေးရင်မှ သတိထားမိတယ်။ ကျွန်မ လက်ရှိလုပ်နေတဲ့ company နာမည် နဲ့web site address မတူပါလား။ မတူပေမယ့် ဆက်စပ်မှု့ တော့ရှိပါတယ်။ web site address က ဒီcompany ရဲ့ ဆောင်ပုဒ်ပဲ။ ဒါတွေထားပါ။ ခုနက ဟာကို ဆက်တွေးရမယ်။
Name တွေ ကြိုဝယ်ရာမှာ Company မဟုတ်သေးတဲ့ ဒါပေမယ့် နောင်တစ်ချိန်ချိန်မှာ တစ်ခုခုလုပ်မယ် ရည်ရွယ်သူများက general ကျတဲ့ နာမည်မျိုး၊ လူသိများတဲ့ နာမည်မျိုး ၊ ဒါမှ မဟုတ် ငါ့ company ဖွင့်ရင် ဘာပေးမယ်ဆိုပြီး တွေးထားတဲ့ နာမည် မျိုးတွေကို ၀ယ်ကြမယ် ထင်တယ်။ personal အတွက်ပဲ ရည်ရွယ်သူ တွေကရော။ အင်း ကြုံဘူး၊ တွေ့ ဘူးသလောက် အမြင်အရ ပြောရမယ် ဆိုရင်ကတော့ personal site တွေလုပ်မယ့်သူတွေက နာမည်လှလှလေးတွေ စဉ်းစားပြီး ၀ယ်ကြတယ်၊ ၀ယ်ထားကြတယ်ပေါ့။ ကျွန်မ သူငယ်ချင်း တစ်ချို့နာမည်လှလှနဲ့domain name လေးတွေ ၀ယ်ထားတာတွေ့ တယ်။ (ကျွန်မကတော့ သူတို့ တွေလို နာမည်လှလှ လေးတွေ မစဉ်းစားတတ်ပါဘူး။) တစ်ချို့ ကျတော့လည်း personal အတွက်ဆိုတောု့ သူတို့နာမည်နဲ့ ပဲ website လုပ်မယ်ဆိုပြီး domain name တွေဝယ် ထားကြတယ်။ ဒီလို ကိုယ့်နာမည်နဲ့ ကို domain name ကြိုဝယ်ထားသူများကို အမျှော်အမြင်ကြီးပြီး၊ နောင်တခေတ်မှာ ထင်ရှားလာနိုင်တဲ့ သူတွေလို့ပြောလို့ ရမယ် ထင်တယ်။ ကျွန်မ အထင်ပေါ့လေ။ ကျွန်မ ဘာလို့အဲ့လို ထင်လဲ။ ရှင်းပါတယ်။ မသိဘူးဆို ရှင်းပြချင်ပါတယ်။
ဘယ်လို လူတွေက သူတို့ နာမည်တွေနဲ့site တွေလို ရှိဖို့ လို မလဲ။ ကျွန်မတို့ုလို သာမန်လူတွေက website တစ်ခုရှိဖို့လိုတောင်မှ ကြိုက်တဲ့ နာမည်ပေး အရေးမကြီးလောက်ပေမယ့် ထင်ရှား၊ ကျော်ကြား လူသိများတဲ့ သူတွေ မှာတော့ သူတို့ကိုယ်ပိုင် နာမည်တွေနဲ့web siteတွေ ရှိကိုရှိဖို့ လိုမှာ သေချာပါတယ်။ ဘာလို့လည်း ဆိုတော့ သူတို့ ကို လူတိုင်းက စိတ်ဝင်စားကြပြီး၊ သူတို့အကြောင်ကို သိချင်သူတွေ သူတို့အကြောင်းတွေကို internet မှာ ရှာဖွေရာမှာ လွယ်လွယ်ကူကူ ရှာဖွေနိုင်အောင်က သူတို့ နာမည်တွေကို သုံးပြီး site တွေ လုပ်ထားမှ အဆင်ပြေမှာပါ။ (မလို ဘူးမပြောပါနဲ့ ။ ဒီခေတ်က ဟိုခေတ်တွေကလို စာကြည့်တိုက်သွား၊ သိ,သူတွေစီသွားပြီး အကြောင်းအရာတွေ စုနေဖို မလိုပဲ၊ internet မှာ enter တစ်ချက်ခေါက်လိုက်ယုံနဲ့သိချင်တာတွေ အကုန်သိနိုင်၊ လိုချင်တာတွေ အကုန်ရနိုင်တဲ့ ခေတ်ရောက်နေပြီဆိုတော့ လိုတယ်လေ။) လိုက်ရှာကြည့်ပါ။ ခုခေတ် နာမည်ကြီးနေတဲ့ သူတွေတိုင်းမှာ သူတို နာမည်တွေနဲ့ကိုယ်ပိုင် web site တွေရှိပါတယ်။
ကျွန်မ မှာတော့ ကိုယ့်နာမည်နဲ့website မရှိ၊ domain ၀ယ်ထားတာလဲ မရှိပါဘူး။ ကျွန်မကို အမျှော်အမြင် မရှိတဲ့ လူလို့ ယူဆလိုက ယူဆနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်မ စိတ်မဆိုးပါဘူး။ :D တကယ်တော့ ကျွန်မကိုယ် ကျွန်မ ထူခြား လူသိများ လာမယ့် သူလို့မထင်တဲ့ အတွက် မလိုအပ်ဘူးထင်လို ကိုယ့်နာမည်နဲ့ ကိုယ် မ၀ယ်ဖြစ်တာပါ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မရဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ ထဲမှာတော့ နောင်တခေတ်မှာ နာမည်ကြီးလာမယ့် အမျှော်အမြင်ကြီးသူတွေ တော်တော်မျာများ ရှိ ကြောင်း ကြုံတုန်းလေး ပြောလိုက်ပါဦးမယ်။ ဘယ်သူတွေလည်း သိချင်ရင် တော့…… ပြောပြမယ်။ ခုတော့ မဟုတ်သေးပါဘူး။ အိမ်ပြန်ချိန်ရောက်နေလို့ ပါ။ ပြန်ပါတော့မယ်။ ကောင်းသော ညနေခင်းပါ။
Posted by Nay Nay Naing at 11/02/2006 09:17:00 PM2comments
ဒီမေးခွန်းရဲ့ အဖြေကို သိကြပါသလား။ ခုချိန်မှာ internet မှာ web site တွေ ဘယ်လောက်များရှိနေပြီလဲ။
ကျွန်မ သိသလောက်၊ ကျွန်မ internet ဆိုတာကို စသုံးဘူးတဲ့ ၂၀၀၀ က နဲ့ နှိုင်းယှဉ် ကြည့်ရင်တောင်မှ တစ်နေ့တစ်နေ့ တိုးလာလိုက်တဲ့ မြန်မာလို ရေးတဲ့ web site တွေက တင် မနည်းပါဘူး။ ကျွန်မတို့ နိုင်ငံလို IT သိပ်မဖွံ့ဖြိုးသေးတဲ့ နိုင်ငံ က ဘာသာစကားဖြစ်တဲ့ မြန်မာလို ရေးတဲ့ site၊ English လို မြန်မာ နိုင်ငံ အကြောင်းရေးတဲ့ site တွေတောင် ဒီလောက်များလာတယ်ဆို ၊ တစ်ခြားနိုင်ငံတွေက English လိုရေးတဲ့၊ ကျွန်မ ကြားဘူးရုံ ကြားဘူးပြီး နားမလည်တဲ့ တစ်ခြား ဘာသာ စကားတွေ၊ ကျွန်မ လုံးဝ ကို မကြားဘူးတဲ့ ဘာသာစကားတွေနဲ့ရေးတဲ့ website တွေ က အရမ်း တိုးပွါး များပြားလာမယ်ဆိုတာ သေချာပါတယ်။ ကဲ တိုးလာတာတော့ သေချာပြီ၊ ဒါဆို ခုဆို အင်တာနက်မှာ တင်ထားတဲ့ website ပေါင်း ဘယ်လောက်ရှိနေပြီလဲ။ ၁ သ်ိန်းလား၊ ၁ သန်းလား၊ သန်း ၆၀ လား။
ဒီနေ့ ဖတ်လိုက်ရတဲ့ သတင်းအရဆို အင်တာနက်မှာ ရှိတဲ့ site ပေါင်း က သန်း ၁၀၀ ကျော်သွားပါပြီတဲ့။ ဒီအရေအတွက်ဟာ netscraft ရဲ့ survey အရသိရတာပါလို့ ဆိုထားပါတယ်။ အဲ့ဒီ သတင်ထဲမှာပဲ ဒီနေ့ ရှိနေတဲ့ web site အရေအတွက်ဟာ ၂၀၀၄ ကရှိနေတဲ့ web site အရေအတွက် သန်း ၅၀ ရဲ့ ၂ ဆ ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောထား ပြန်ပါသေးတယ်။ ၂ နှစ် အတွင်း ၂ဆ တက်လာတယ်ဆိုတာ မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ပါပဲ။
ဒါပေမယ့် ဒီ site တွေအကုန်လုံး Internet ပေါ်မှာ active ဖြစ်နေသေးတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ active ဖြစ်နေတဲ့ အရေအတွက်က သန်း ၅၀ လောက်ရှိတယ်လို့အဲ့ဒီ site ရဲ့ survey အရ သိရပြန်တယ်။ အဲ့ဒီ site တွေ အကုန်လုံးသာ active ဖြစ်သွားမယ်ဆို wow… internet ကြီးမှာ ဘယ်လောက်တောင် website တွေ ပွထပြီး ရှုပ်ရှက်ခက်၊ ဖတ်စရာ မကုန်နိုင်အောင် ဖြစ်နေ လိုက်မလဲ။ ခုလောက်တောင်မှ Internet မှာ ဟိုဖတ်ဒီဖတ် လိုက်လုပ်ဖို့အချိန်က မလောက်ဖြစ်နေတာ။ ပြီးတော့ နောက်ဆို လူတိုင်း၊ အဖွဲ့အစည်းတိုင်း၊ လုပ်ငန်းတိုင်း ကိုယ်ပိုင် website ရှိပြီး၊ မရှိရင် ခေတ်မမှီ ဘူးပြောရတော့မယ်။ ဟို ဟာသ ကာတွန်းလေး ထဲကလို ကိုယ်ပိုင် website မရှိသေးလို့website လုပ်ဖို့ ပါဆိုပြီ့း ပိုက်ဆံလိုက်တောင်းနေရမလို့ ဖြစ်နေတော့မှာပဲ။
Posted by Nay Nay Naing at 11/02/2006 03:48:00 PM0comments
ဘာလိုလို နဲ့မျှော်သူတို့အလိုကျ နိုဝင်လာလ ရောက်ခဲ့ ပြန်ပြီ။ ၁၂ လရှိတဲ့ အထဲက ကျွန်မ အကြိုက်ဆုံး လတွေကို ပြောပါဆို နိုဝင်ဘာ နဲ့ဒီဇင်ဘာ က ထိပ်ဆုံးမှာ ရှိနေပြီး၊ အောက်တိုဘာ နဲ့စက်တင်ဘာ က နောက်က လိုက်နေတယ်လို့ပြောရမယ် ထင်တယ်။ နောက်လ ကုန်ရင် ၂၀၀၆ ကုန်လို့၂၀၀၇ ရောက်ပြန်တော့မယ်။ နှစ်ဟောင်းကုန်လို့နှစ်သစ်စတော့မယ်။ တစ်နှစ် တစ်နှစ် ကုန်တာကလည်း မြန်လိုက်တာလို့ပြောရမယ်ထင်တယ်။
ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ခုချိန်ဆို ဒီနှစ်အတွင်း ပြီးအောင်လုပ်မယ် ကြံထားတာတွေ ပြီးလုပြီးခင် ဖြစ်နေသင့်ပြီ။ မဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်လည်း ပြီးအောင်လုပ်ဖို့ဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင် ပြန်စဉ်းစားပြီး တစ်ခုခုတော့ လုပ်သင့်နေပြီး ထင်တယ်။ plan ရှိ၊ အကြံ ရှိနေသူများကို သတိပေး စကားလေး ပြောချင်တာပါ။
အားလုံး ဒီ နိုဝင်ဘာလမှာ ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းသော အချိန်များကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ။ ကျွန်မလည်း ပျော်ရွှင် နိုင်ပါစေ။ သူငယ်ချင်းများ အားလုံးလည်း ပျော်ရွှင်ကြပါစေ။ သက်ရှိ သတ္တ၀ါများ အားလုံး အစစ အရာရာ အဆင်ပြေ ချမ်းမြေ့ ပျော်ရွှင် နိုင်ကြပါစေ။
Song for November : Guns n' Rose - November Rain , Lyrics
Labels: Day, Music, Thoughts
Posted by Nay Nay Naing at 11/01/2006 05:44:00 PM4comments